Ubuntu 8.04 LTS "Hardy Heron" dia hajanona amin'ny fomba ofisialy | Avy amin'ny Linux
Tsy hotohanana amin'ny fomba ofisialy intsony ny Ubuntu 8.04 LTS "Hardy Heron"
Tal toa an'i Pablo tao Soft-Libre, Mila maneho ny tenako amin'ity vondron'olona namana / mpamaky ity aho. Ary tsy te-hitsahatra tsy hanao izany amin'ny fidirana fohy aho, fa ny iray izay hitondra fiverenana ho fahatsiarovana ho an'ny maro.
Farafaharatsiny farafaharatsiko manokana dia tadidiko fa rehefa nahavita ny mari-pahaizana momba ny lalàna aho dia tamin'ny fotoana nanombohako nisedra ny GNU / Linux. Satria tsy hisy izany raha tsy izany dia nanomboka tamin'ny Ubuntu aho, avy eo Hadry Heron, izay saika manodidina ny kinova 8.04.1
Ny olana lehibe, tsy nanana fifandraisana Internet aho; ary raha tsy afaka nanamboatra sy nametraka rindrambaiko tamin'ny alalàn'ny USB aho vao nanomboka nampiasa faran'izay farany sy manokana an'ity rafitra fiasa ity.
Hatramin'io fotoana io dia tsy mampiasa afa-tsy ny GNU / Linux aho ary nanandrana nitory filazantsara tamin'ny namana rehetra hitako, indrindra ireo namako avy amin'ny ModMovil Staff.
Na izany aza, ny andro voninahitry ny iray amin'ireo fanontana tsara indrindra amin'ny Ubuntu dia hifarana, efa ho tapitra ny 36 volana nomanina ho an'ny fanontana amin'ny birao ary, vokatr'izany, hatsahatra ny fanohanana an'ity distro amin'ny Canonical ity. Araka izany, avy amin'ny May 12 amin'ny 2011, Canonical dia hijanona tsy hanohana ny fanontana Ubuntu 8.04 LTS Desktop (Hardy Heron) miaraka amin'ny fanamboarana mitsikera sy fiarovana ary manavao ny rindrambaiko. Ny fanontana Server an'ny Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) dia hitohy havaozina amin'ny alàlan'ny fanitsiana bibikely sy fanavaozana ny fiarovana.
Under the motto "Raha miasa dia aza ovaina" Azo antoka fa maro no mbola mankafy an'i Hardy, saingy lany ny fotoana ary voatery terena hanatsara ny 10.04 "Lucid Lynx" izy ireo, avy hatrany ny LTS aorian'ny Hardy, fa miandry mandritra ny 2 herinandro ary andramo ilay foto-kevitra vaovao nomanin'i Canonical ho antsika izay te hampiasa sy hankafy ity rafitra fiasa tena tsara ity.
Fahafaham-po be no nitondra ny maro tamintsika tamin'ity fanontana lehibe an'ny Ubuntu ity, fiainana tsara Hardy Heron.
Raha izaho manokana dia misaotra betsaka an'i Pablo tamin'ny nanomezany ahy an'ity fahafaha-manao ity ary manantena aho fa hahavita ilay asa.
Vao niditra tao amin'ny mpanoratra bilaogy i Martín.
Raha tianao ity lahatsoratra ity dia azonao atao ny manaraka azy Malalaka-Malalaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Tsy hotohanana amin'ny fomba ofisialy intsony ny Ubuntu 8.04 LTS "Hardy Heron"
Tongasoa ary misaotra betsaka anao amin'ny input = D
Ny Ubuntu voalohany nanandramako dia ity iray ity, ka tsy mahatadidy an'io aho ary ny tsy anohana azy intsony ... ny zavatra tsara tsy maharitra mandrakizay, fa ny nahafinaritra azy ireo raha naharitra izy ireo.
joab ramos dia hoy izy:
huy distro voalohany
Tadidiko fa rehefa nivadika linux aho no zavatra hitako voalohany dia ny ubuntu 8.04, satria efa tezitra tamin'ny virus guin2 aho
Mamaly an'i joab ramos
Nahazo sambany daholo isika, sa tsy izany? Haha ..
Tongasoa i Martin, bilaogy tsara izay misy anao ankehitriny.
Martin, amin'ireo fizarana linux malaza indrindra (tsy mandoa vola), fantatrao ve hoe iza amin'ireo no manana fotoana lava indrindra hanohanana amin'ny kinova mpizara? Fantatro fa manana mpanohana 5 taona ny mpizara ubuntu LTS. Te hahafantatra aho raha misy fizarana Linux hafa manana fotoana fanohanana lava kokoa noho ireo 5 taona ireo.
Martin Casco dia hoy izy:
Amin'ny tranga Ubuntu eny, ny LTS an'ny fanontana Server. Mikasika ireo fizarana hafa, tsy fantatro izany.
Azo antoka fa ao amin'ny CentOS na distro manokana ho an'ny mpizara.
Mamaly an'i Martín Casco
Ireo distro Linux Espaniola tsara indrindra